baganmart | Vootee
Tag Archives: baganmart
UMG Myanmar Co.,Ltd – Baganmart
UMG Group of Companies was founded in 1998. Sales, Maintenance, Hiring and Remanufacturing are the main pillars of our organization. On the 14th Anniversary of UMG, we were awarded with ISO 9001:2008 certification.
We have approximately 2000 strong UMG-ians behind us, spread across the country, operating in our Head Office, 17 branches, and growing. UMG is now standing asagreat industry leader who provides the best services and has acquired the satisfaction of the customers
Posted in Business	| Tagged baganmart, companies, group, Myanmar, umg | Leaveacomment |
Tun Tun and Brothers Co.,Ltd – Baganmart
၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တောင်သူဦးကြီးများ စပါးအချိန်မှီလျင်မြန်စွာ ရိတ်သ်ိမ်းနိုင်ပြီး အလုပ်များပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းစက်နှင့် စပါးစက်အပိုပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရောင်းချပေးနေပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted in Business	| Tagged စ, ၂၀၁၂ခ, baganmart, brothers, tun | Leaveacomment |
ProTech Transfer Co.,Ltd – Baganmart
ProTech Transfer Co., Ltd. deliver superior, long-term value products to our Thai customers, mainly manufacturers of gold and silver jewelry, providing them with innovative products and technical services, aimed to satisfying their production requirements.
Posted in Business	| Tagged baganmart, deliver, protech, superior, transfer | Leaveacomment |
Cherrymyanmar – Cosmic Water Co.,Ltd – Baganmart
နိုင်ငံတကာနှင့်ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်1999 ခုနှစ်တွင် ထိုင်း co.,ltd မှ မှတ်ပုံတင်1980ခုနှစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ရေစစ်ထုတ်မှု ဒီဇိုင်းမှာ ၀န်ဆောင်မှုပြီးသည့်တိုင်အောင် ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်ပြီးကြီးမားတဲ့စက်ရုံတွေမှာ အသုံးပြုရန်ရည်၇ွယ်သည်။ အတွေ့အကြုံအပြည့်အ၀၇ှိပြီး အေ၇ှ့တောင်အာရှမှာ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနှင့်တောင်အာရှတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယနှင့် အရှေ့အာရှတွင် တ၇ုတ် ၊တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်စသည့်တစ်လျှော က်လုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးမှ serviceပေးပြီးကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန်သည် အမျိုးအစားသီးခြားဖြစ်သည်။
Posted in Business	| Tagged င, baganmart, cherrymyanmar, cosmic, water | Leaveacomment |
THAI-7 Trading Limited – Baganmart
ထိုင်း-ဆဲဗင်းသည် Kubota ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Original,Parts,Sales&Engine အပိုပစ္စည်းများကို အထူးအာမခံချက်များဖြင့် လက်လီ၊လက်ကား ရောင်းချပေးနေသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted in Business	| Tagged ထ, baganmart, limited, thai, trading | Leaveacomment |